အလိုလျောက် Cartoning စက်ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - China Automatic Cartoning Machine ထုတ်လုပ်သူများ
တံဆိပ်၊ Tube၊ ဆီမွှေး၊ Sachets၊ ဆေးထိုး၊ အလှကုန်၊ ကွန်ဒုံး၊
အလှပြင်ပစ္စည်း၊ ကွန်ဒုံး၊ အမ်ပလင်းများ၊ ထယ်ထုပ်ထားသောထုတ်ကုန်များအလျားလိုက်မြေပုံဆွဲစက်များအဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ - ၁။ အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်း၊ ဖြည်ခြင်း၊ နို့တိုက်ခြင်း၊ နှင့်အခြားထုပ်ပိုးပုံစံများ, ဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်သိပ်သည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်နှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းမှုရိုးရှင်း; 2. Servo / stepping motor, touch screen နှင့် PLC programmable control system သည်လူ၏စက်ကိုပြသရန်အတွက် ...
အတောင့်များ၊ ဆီမွှေးများ၊ Sache များ၊ Tube ထိုးဆေးများ၊ အလှကုန်များ၊ ကွန်ဒုံးများ၊
တံဆိပ်၊ Tube၊ ဆီမွှေး၊ Sachets၊ Tube Injection၊ Cosmetis, Condom, Ampoules, Plough-Wrappped ထုတ်ကုန်များအလျားလိုက် Cartoning စက် (ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်) အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ - ၁။ အလိုအလျောက်နို့တိုက်ကျွေးခြင်း၊ output ကို။ နှင့်အခြားထုပ်ပိုးပုံစံများ, ဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်သိပ်သည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်နှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းမှုရိုးရှင်း; ၂။ Servo / stepping motor, touch screen နှင့် PLC programmable control system ကို ...
Tyz-130 Automatic Condom Cartoning စက်
အလိုအလျောက်ဆေးပြားပုလင်း Cartoning စက်၏အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ - ၁။ အလိုအလျောက်ကျွေးမွေးခြင်း၊ ဖြည်ခြင်း၊ နို့တိုက်ခြင်း၊ နှင့်အခြားထုပ်ပိုးပုံစံများ, ဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်သိပ်သည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်နှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းမှုရိုးရှင်း; 2. Servo / stepping motor, touch screen နှင့် PLC programmable control system တို့သည်လူ - စက်မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင်လည်ပတ်မှုကိုပိုမိုရှင်းလင်းလွယ်ကူစေရန်အတွက်အလိုအလျောက်မြင့်မားသော၊ အလိုအလျောက် ...
စိုစွတ်သော Wipe များအတွက်အော်တိုသေတ္တာထုပ်စက်
TYZ-130 အလိုအလျောက် Cartoning စက် Customzied cartoning စက်သည်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သည်။ အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ - ၁။ အလိုအလျောက်ကျွေးမွေးခြင်း၊ ဖြည်ခြင်း၊ နို့တိုက်ခြင်း၊ နှင့်အခြားထုပ်ပိုးပုံစံများ, ဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်သိပ်သည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်နှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းမှုရိုးရှင်း; ၂။ Servo / stepping motor, touch screen နှင့် PLC programmable control system တို့သည်လူ - စက်၏မျက်နှာပြင်လည်ပတ်မှုကိုပိုမိုရှင်းလင်းစေရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက် ...။
Hardware Bearing အတွက် Horizontal Cartoning Machine
Hardware Bearing အတွက်အလျားလိုက် Cartoning စက်၏အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ - ၁။ အလိုအလျောက်ကျွေးမွေးခြင်း၊ ဖြည်ခြင်း၊ နို့တိုက်ခြင်း၊ နှင့်အခြားထုပ်ပိုးပုံစံများ, ဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်သိပ်သည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်နှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းမှုရိုးရှင်း; 2. Servo / stepping motor, touch screen နှင့် PLC programmable control system တို့သည်လူ - စက်မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင်လည်ပတ်မှုကိုပိုမိုရှင်းလင်းလွယ်ကူစေရန်အတွက်အလိုအလျောက်မြင့်မားသော ......
Tyz-130 အလိုအလျောက်စားနပ်ရိက္ခာ၊ စက်ပစ္စည်း၊ ဆေးဝါး၊ အလှကုန်၊ ဆေး၊ ပုလင်း၊
Tyz-130 အလိုအလျောက်စားနပ်ရိက္ခာ၊ စက်ပစ္စည်း၊ ဆေးဝါး၊ အလှကုန် / ဆေးဝါး / ပုလင်း၊ အိတ်ထည့်စက်များ Cartoning Machine အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ - ၁။ အလိုအလျောက်ကျွေးမွေးခြင်း၊ ဖြည်ခြင်း၊ နို့တိုက်ကျွေးခြင်း၊ နှင့်အခြားထုပ်ပိုးပုံစံများ, ဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်သိပ်သည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်နှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းမှုရိုးရှင်း; 2. Servo / stepping motor, touch screen နှင့် PLC programmable control system ကိုလူ - စက် interface မျက်နှာပြင်၏ပြသမှုကိုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
ပျော့ပျောင်းသော Tube များအတွက်အလိုအလျှောက် Cartoning စက်
ပျော့ပျောင်းသော tubes များအတွက်အလိုအလျောက် Cartoning စက် Customzied cartoning စက်သည်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သည်။ အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ - ၁။ အလိုအလျောက်ကျွေးမွေးခြင်း၊ ဖြည်ခြင်း၊ နို့တိုက်ခြင်း၊ နှင့်အခြားထုပ်ပိုးပုံစံများ, ဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်သိပ်သည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်နှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းမှုရိုးရှင်း; 2. Servo / stepping motor, touch screen နှင့် PLC programmable control system တို့သည်လူ - စက် interface မျက်နှာပြင်ကိုရှင်းလင်းစေရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
TYZ-130 အလိုအလျောက်အစားအစာယမကာဆေးဝါးထုတ်ကုန်များသေတ္တာထုပ်ပိုးပုံး Carton စက်စိတ်ကြိုက် Cartoning စက်သည်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သည်။ အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ - ၁။ အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်း၊ နို့တိုက်ခြင်း၊ နှင့်အခြားထုပ်ပိုးပုံစံများ, ဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်သိပ်သည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်နှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းမှုရိုးရှင်း; ၂။ Servo / stepping motor, touch screen နှင့် PLC programmable control system ကို ...
Hot Glue Sealing နှင့် Tyz-130 Automatic Box Packing Machine
Tyz-130 အလိုအလျောက်စားနပ်ရိက္ခာ၊ စက်ပစ္စည်း၊ ဆေးဝါး၊ အလှကုန်၊ ဆေးဝါး၊ ပုလင်း၊ အိတ်နှင့်အထုပ်များထုပ်ပိုးခြင်း Cartoning Machine အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ - ၁။ အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်း၊ နှင့်အခြားထုပ်ပိုးပုံစံများ, ဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်သိပ်သည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်နှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းမှုရိုးရှင်း; ၂။ Man-machine interface ၏ရှင်းလင်းသောလုပ်ဆောင်မှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန် Servo / stepping motor, touch screen နှင့် PLC programmable control system ကိုအသုံးပြုသည်။
Tyz-130 အလိုအလျောက်ကွန်ဒုံးဖုံးအုပ်စက် Carton Machine
TYZ-130 အလိုအလျောက်ကွန်ဒုံးလက်ဝှေ့ယ်စက်၊ ကွန်ဒုံးသေတ္တာစက်၊ ကွန်ဒုံးကွန်တိန်နာအဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ - ၁။ အလိုအလျောက်ကျွေးမွေးခြင်း၊ ဖြည်ခြင်း၊ နို့တိုက်ခြင်း၊ နှင့်အခြားထုပ်ပိုးပုံစံများ, ဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်သိပ်သည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်နှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းမှုရိုးရှင်း; 2. Servo / stepping motor, touch screen နှင့် PLC programmable control system တို့သည်လူ - စက်၏မျက်နှာပြင်လည်ပတ်မှုကိုပိုမိုရှင်းလင်း။ အဆင်ပြေစေရန်အသုံးပြုသည်။
Blister Tray လက်ဝှေ့စက်၌အလိုအလျောက်ချိုသောဂျယ်လီ
Blister Tray လက်ဝှေ့စက်တွင်အလိုအလျောက်ဂျယ်လီအရည်ကြည်ဖုလေးများထဲတွင်အရည်ရွှန်းအရည်ရွှံ့ဗန်းထဲတွင်ဂျယ်လီအရည်ကြည်ဖုရှိအခြားထုတ်ကုန်များ (ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်) အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ - ၁။ အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်း၊ ဖြည်ခြင်း၊ နို့တိုက်ခြင်း၊ နှင့်အခြားထုပ်ပိုးပုံစံများ, ဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်သိပ်သည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်နှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းမှုရိုးရှင်း; ၂။ Servo / stepping motor, touch screen နှင့် PLC programmable control system ကိုပြုလုပ်သည်။
Tyz-130 အလိုအလျောက်ဆေးပုလင်းပုလင်းတုံး၊ ပုလင်းကန်တိုစက်
Tyz-130 အလိုအလျောက်ဆေးပြားပုလင်းကျည်သုတ်စက်၊ ပုလင်းကန်စက်၏အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ - ၁။ အလိုအလျောက်ကျွေးမွေးခြင်း၊ ဖြည်ခြင်း၊ နို့တိုက်ခြင်း၊ နှင့်အခြားထုပ်ပိုးပုံစံများ, ဖွဲ့စည်းပုံကျစ်လစ်သိပ်သည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်နှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းမှုရိုးရှင်း; ၂။ Servo / stepping motor, touch screen နှင့် PLC programmable control system တို့သည်လူ - စက်မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင်လည်ပတ်မှုကိုပိုမိုရှင်းလင်းလွယ်ကူစေရန်အတွက်မြင့်မားသောdနှင့်အတူ ...